Soo ogow waxaad ku arki karto Sil Canyons | Wararka Safarka
Susana Garcia | | Espana, General, Maxaa la arkaa
Dhammaanteen waxaan ku heshiin doonnaa in bulshada reer Galician ay leedahay muuqaal dabiici ah oo dabiici ah oo ka dhigaya dalxiis dalxiis. Marka waa inaad taqaanaa mid kasta oo ka mid ah. Mid ka mid ah qodobbada sida aadka u jecel marka la eego meelaha dabiiciga ah waxaa loo yaqaan 'Sil Canyon', aag ka mid ah wabiyada ay qodeen marinka wabiga Sil ee deegaanka Ribeira Sacra, aag sidoo kale caan ku ah khamrigiisa.
Meeshan shaki la'aan waxay leedahay waxyaabo badan oo aan soo bandhigno haddii aan dooneyno inaan sameyno safar gaaban. Laga soo bilaabo doonyaha doonyaha ee Sil ilaa aragtida, waddooyinka socodka iyo kaniisado duug ah oo qurux badan. Shaki la'aan waa meel aad ugu raaxeysan karto waxa ugu wanaagsan Ribeira Sacra.
1 Sidee ayaan ku tagnay Sil Canyons-ka
2 Meel dabiici ah oo gaar ah
3 Aragtida laga helayo silsiladaha sil
4 Wadooyinka doomaha
5 Wadada monasteriyada
Sidee ayaan ku tagnay Sil Canyons-ka
Kuwa doonaya inay gaaraan aaggan, si caadi ah Waxay aadaan magaalada Orense, taas oo aad si fudud uga gaari karto qulqulka Sil. Kaliya haddii aad ka timid aagga woqooyi waa inaad aadaa Monforte de Lemos oo ka socda gobolka Lugo. Orense ka soo qaad N-120 oo Vilamelle u leexo dhanka LU-P-5901. Laga soo bilaabo Monforte de Lemos waxaad ka qaadaneysaa PO-533 ka dibna wadada kor ku xusan. Waxaan ku raaci karnaa gaari ama sidoo kale waxaan isku qori karnaa dalxiis, maaddaama qaar laga soo abaabulo magaalooyinka Santiago de Compostela iyo Ourense.
Meel dabiici ah oo gaar ah
Sil Canyons-ka waxaa qoday marinka wabiga sil waxaana loo arkaa dadka qaar inay yihiin buuraha dhaadheer ee ugu hooseeya Yurub. Isbarbar dhigga ka sokow, buundooyinkani waxay leeyihiin taajirnimo gaar ah. Meesha ay ku taallo ayaa macnaheedu yahay in qaar badan oo ka mid ah caadooyinkeeda iyo hiddaheeda ay weli taagan yihiin, taas oo ka dhigaysa aag qiime weyn leh Kastamyada sida dhoobada madow ee Gundivós ayaa caddeyn u ah tan. Intaas waxaa sii dheer, waa la ogyahay in gudaha aaggan waxaa lagu fuliyaa beerista canab, oo ah nidaam aad uga duwan kan beeraha canabka ah ee caadiga ah, maaddaama lagu aasaasay dhaadhaca buuraha. Qaabka looga saaro dambiilaha canabku waa tareenno dhawaan la dhigay ama lagu dejinayo webiga halkaasoo laga soo qaadayo markab waaweyn, kaas oo ahaa habka caadiga ah.
Aragtida laga helayo silsiladaha sil
Mid ka mid ah waxyaalaha sida aadka ah u jecel goobahan dabiiciga ah ayaa ah aragtiyaha cajiibka ah ee aad ka qaadan karto sawir-qaadista quruxda badan. Meel u dhow magaalada Parada de Sil, oo badanaa ka mid ah meelaha laga istaago haddii aan baabuur ku raacno, waa mid ka mid ah aragtiyada ugu wanaagsan ee jira. Waxaan ula jeednaa Balconies-ka Madrid. Haddii aan tagno Sanctuary of Cadeiras waanu ka xignaa. Meeshan waxaad ka leedahay runtii aragtiyo aad u qurux badan oo ku saabsan Canyons-ka waana ku habboon tahay inaad halkaas gaarto. Aragtiyada kale waa Mirador das Cadeiras ee Sampil, iyagoo fiirinaya dhinaca kale ee Balcones de Madrid. Muuqaalka Santiorxo wuxuu leeyahay socod alwaax ah oo laga soo arko Santa Cristina de Ribas de Sil monastery. Meel u dhow sidoo kale waa aragtida Sanctuary ee Cadeiras iyo Cotarro das Boedas. Mirador de Cividade waxay ku taal aagga Lugo waxayna leedahay socod lug ah oo bir ah oo ku siin kara xoogaa isdaba joog ah. Mirador del Duque gudaheeda waxaad ku arkeysaa dhul-beereedka loogu talo galay beerista canabka.
Booqashada gawaarida marka lagu daro booqashada gawaarida, waxaa jira wax kale oo ay tahay inaan sameyno haddii aan booqaneyno Sil Cañones. Ku saabsan yahay u soco wadada catamaran ee wabiga Sil, hoos ka daawan karayoonada. Socdaallada webiga waxaa laga sameyn karaa meelo kala duwan, sida ku yaal Santo Estevo, Nogueira de Ramuín, Abeleda, Castro Caldelas ama Belesar, O Saviñao. Waxaa lagugula talinayaa inaad keento ku keydi meesha doonta xilli sare, taasi waa, xilliga kuleylaha, maxaa yeelay booqashooyinka ayaa si dhakhso leh u buuxin kara.
Markaan wadada ku raaceyno gaari, waa inaanu istaagin oo kaliya meelaha la arko, laakiin sidoo kale inaan ku raaxeysano hidaha aagga. Gaar ahaan kaniisadaha qadiimiga ah ee ku jira qodobo gaar ah. Monastery of Santo Estevo de Ribas de Sil hadda waa horjooge, markaa waxay noqon kartaa hoy wanaagsan. Ku Monastery ee Santa Cristina de Ribas de Sil Waa mid ka mid ah banaanbaxyadii ugu fiicnaa ee Romanesque ee miyiga Galicia. Guri keniisad ah oo la dhisay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad oo ilaaliya joogitaankiisa. Mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan waa rugta Romanesque ee gudaha ku dhex taal, oo leh albaab laga soo galo oo qurux badan iyo munaarad u adeegtay sidii waardiye iyo munaarad dawan. Meel kale oo aan arki karno waa Sanctuary of Cadeiras oo ku taal Sober, oo agagaarkeeda uu ku yaal qalcad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Maxaa lagu arkaa Sil Canyons-ka Galicia
Hoteellada boutique ee Toledo